जहाँ छन्, सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु मा युरोप | एक ट्रेन सेव
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 27/11/2020)
Venaria Reale, ओस्लो, इटाली
स्ट्रिम गरेर संग्रहालय, आन्ट्वर्प, बेल्जियम
स्ट्रिम वा MAS गरेर संग्रहालय आन्ट्वर्प मा सबै भन्दा ठूलो संग्रहालय छ. तपाईं एक खोजिरहेको भने मनोरम दृश्य, त्यहाँ निःशुल्क पहुँच छ छत संग्रहालयका. MAS को जटिल पनि छ एक रेस्टुरेन्ट र यो तल क्याफे. तपाईंलाई भने संग्रहालय नै राम्रो र यात्रा लायक छ आन्ट्वर्प.
को अर्को संग्रहालय नेदरल्यान्ड्स, को बाइबलीय संग्रहालय मा स्थित छ एम्स्टर्डम. के तपाईं बाइबल बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु मध्ये एक छ. भ्रमण Bijbels डच समाज मा बाइबल महत्त्व र प्रभाव बुझ्न मद्दत गर्छ. यो पक्कै पनि एक अद्वितीय संग्रहालय छ, प्रेम गर्नेहरूका लागि राम्रो-अनुकूल धार्मिक इतिहास.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु तपाईं पर्खिरहेका छन्. तपाईं जान तयार छन् भने, तपाईंको रेल टिकट बुक अहिले र सवारी आनन्द!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#संग्रहालयहरु #traveleurope europetravel eurotrip संग्रहालय यात्रा travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands traveltips